Argentina: Fankalazana ny faha-roanjato taona amin’ny aterineto · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 05 Jona 2010 15:36 GMT
Nankalaza ny faha-200 taonan'ny fiandohan'ny fanasarahana azy tamin'i Espana i Argentina, nanomboka ny May 25, 1810. Tamin'io fotoana io, komity iray tao an-toerana no nanapa-kevitra ny hanongana ny mpanjaka lefitra Espaniola ary hanomboka ny fananganana Governemanta mahaleotena. Isan'ny ao anatin'ity fankalazana ity, eo anelanelan'ny 21-25 May, dia hisy fihetsiketsehana maro, tranoheva avy amin'ireo faritany maro any Argentina, fampisehoana, ary ny fanokafana indray ny Teatra Colón Theater. Analinaliny ireo olona mandray anjara amin'ireo fihetsiketsehana, izay hatao hatramin'ny Talata ho avy izao izay hifamotoanan'ireo olona marobe eo amin'ny kianjan'ny 9 Jolay eo akaikin'ny Obelisk -n'ny renivohitra, Buenos Aires.
Mba handrakofana ireo hetsika ampiasàna ireo fitaovana amin'ny alàlan'ny aterineto, dia nanokatra tranonkala, Tu Bicentenario [es] (Your Bicentennial) ny fikambanana mpitoraka blaogy iray, izay nanakambanan'izy ireo tolotra maromaro amin'ny aterineto samihafa hanamboarana fandrakofana mivantana, amin'ny teny fototra #bicentenarioarg [es]. Ao amin'ity fanadihadihana fohy ity, Vanina Berghella [es], Nicolás Piccoli, ary Alvaro Liuzzi [es] dia niresaka mikasika ny tanjon'ity tetikasa ity.
Manomboka ny Sabotsy 22 ka hatramin'ny 25 ny fanaovana tatitra manodidina ireo fankalazana. Feno hetsika sy fandaharana ny fandaharam-potoana [es], izay no mahatonga ny hevitray hampizara ireo sokajy fanaovana tatitra sy ireo fandaharam-potoana. Ny Twitter sy ny Facebook no tena ampiasainay avy any. Ny hevitray dia ny haka tombony amin'ireo ridram-baiko amin'ny finday sy hizara izay hitanay avy amin'ireo toerana hisy anay.
Tsy nahita tetikasa mitovitovy amin'ity izahay taty Amerika Latina. Somary liana kely amin'ny tetikasan'i Berlin izahay, izay mitatitra momba ny tsingerintaonan'ny nianjeran'ilay rindrina tany Berlin tamin'ny Novambra 2009.